CUDURKA AIDS-ka (HIV) Login
Current Articles Archives Search CUDURKA AIDS-ka (HIV)
Written by webmaster at 2:14 PM on Thursday, November 01, 2007 Tweet
Dr Abdurahman Cunaaye
Cudarka Aids-ka waxa uu fara ba’an ku hayaa malaayiin qof oo dunida guudkeeda ku nool, waxaana u nafwaaya dad aan yareyn maalin walba. Cudarkan oo mashquuliyay maskaxda khubaro badan oo cilmiga sayniska ku takhasusay sidii ay xal ugu heli lahaayeen, dowlado badan iyo hay’ado samafaleedna ay geliyeen maalaayiin doolar oo lacag ah sidii loo xakameyn lahaa cudarkan dilaaga ah. Hadaba waxaa lama-huraan ah inuu qof waliba fikrad ka haysto waxa uu yahay Aids, waxa keena, heerarka uu maro bukaanka cudarkan qabaa, calaamadaha lagu garto iyo siyaabaha kala duwan ee la isugu gudbiyo feyruska keena Cudurkan.
1. Qandho (fever) 2. Madax xanuun (headache) 3. Barar iyo xanuun ku yimaada qanjirada difaaca (lyphadenopathy)
4. Caabuq ku yimaada gudaha dhuunta (pharyngitis) 5. Murqo xanuun (myalgia) 6. Daal (fatigue) 7. Xanuun ku yimaada kala-goysyada (arthratgia) 8. Finan yar-yar oo jirka ka soo yaaca (Macular rash).
1. Barbaro cad-cad (finan) ka soo yaaca carabka, cirridka iyo gudaha dhabanada (oral hairy leukoplakia) 2. Miisanka qofka oo si joogta ah isu dhima (weight loss) 3. Daal badan (fatigue) 4. Dhidid habeenkii ah (Night sweats) 5. Shuban joogta ah. 6. Nabarro maqaarka sare ka soo baxa (koposis sarcoma)
1. Galmo lala sameeyo qof qaba cudurka Aids-ka. 2. Hooyo cudurka qabtaana waxa ay u gudbin kartaa ilmaha ay uurkiisa yeelato, kaas oo ku dhasha cudurkan laayaanka ah. 3. Dhiigga laga soo qaaday qof cudurka qaba oo lagu shubo qof kale ama la taabsiiyo nabar ama dhaawac jirkiisa ka mid ah. 4. Makiinad, qalabka qalliinka, iyo qalabka loo adeegsado ilkaha oo loogu adeegay qof cudurka Aids-ka qaba, qalabkaas oo loo adeegsado qof aan qabin fayruska. 5. Waxaa kale oo cudurkan la isugu gudbin karaa feyraska HIV-ga, caanaha, candhuufta, iyo dheecaanada kale ee jirka qofka Aids-ka qaba.
1) Qofka oo ku ekaada gurigiisa xalaasha ah. 2) Wacyi-gelin dadka lagu wacyi geliyo waxa uu yahay cudurkani. 3) Dhiigagga la deeqo oo baaris lagu sameeyo intaan qofka kale lagu shubin. 4) Sirinjiga qof lagu duro inaan qof kale loo isticmaalin.
10275 Views :: 307 Comments :: :: Health